Heshiisyada Safarka & Dalxiiska ayaa hoos u dhacay 17.4% bishii Ogosto 2021
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Safarka Ganacsiga » Heshiisyada Safarka & Dalxiiska ayaa hoos u dhacay 17.4% bishii Ogosto 2021
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Investments • Wararka Raaxada • Shirka Warka Warshadaha • News • Dadka • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Shopping • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
Dhaqdhaqaaqa heshiiska hoos loo dhigay waxaa loo aanayn karaa dareen-galinta heshiisyada oo yaraaday iyadoo aan la hubin sababtuna tahay masiibada COVID-19 oo wali taagan.
57 heshiisyada waaxda socdaalka iyo dalxiiska ayaa lagu dhawaaqay Ogosto 2021.
Tirada heshiisyada lagu dhawaaqay waxay muujiyeen hoos u dhac 17.4% laga bilaabo Luulyo 2021.
Ogosto ayaa calaamadeysay bishii labaad oo isku xigta oo hoos u dhac ku yimid dhaqdhaqaaqa heshiiska.
Wadar ahaan 57 heshiisyo (oo ka kooban isku -darka & soo iibsiga [M&A], sinnaanta gaarka ah, iyo maalgelinta ganacsiga) ayaa lagu dhawaaqay qaybta socdaalka iyo dalxiiska adduunka intii lagu jiray Ogosto 2021, taas oo ah hoos u dhac 17.4% ka badan 69 heshiis oo lagu dhawaaqay bishii Luulyo, sida laga soo xigtay xogta warshadaha iyo khubarada falanqaynta.
Ogosto waxay calaamad u tahay bishii labaad ee isku xigta ee hoos u dhaca dhaqdhaqaaqa heshiiska ee waaxda socdaalka iyo dalxiiska kadib markii ay dib u soo laabatay bishii Juun. Dhaqdhaqaaqa heshiiska hoos loo dhigay waxaa loo aanayn karaa dareen-galinta heshiisyada oo yaraaday iyadoo aan la hubin sababtuna tahay masiibada COVID-19 oo wali taagan.
Dhammaan noocyada heshiiska (oo hoos imanaya caymiska) ayaa sidoo kale arkay hoos u dhac ku yimid dhaqdhaqaaqa heshiiska bishii Ogosto marka la barbar dhigo bishii hore. Ku dhawaaqista maalgelinta mashruuca, sinnaanta gaarka ah iyo isku -biirinta iyo heshiisyada iibsiga ayaa hoos u dhacay 4.3%, 20% iyo 24.4% intii lagu jiray Ogosto marka loo eego bishii hore, siday u kala horreeyaan.
Dhaqdhaqaaqa heshiiska ayaa sidoo kale hoos u dhacay suuqyada muhiimka ah sida USA, ka UK, Hindiya iyo Australia intii lagu jiray bishii Ogosto marka la barbar dhigo bishii hore, halka Shiinuhu uu goobjoog ka ahaa hagaajinta dhaqdhaqaaqa heshiiska.